Faracii Ibraahim, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Kaniisadda ayaa ah jidhkiisa oo isagu ku dhex noolaada iyada oo dhan. Waa kan wax walba buuxiya iyo qof kasta oo joogitaankiisa jooga (Efesos 1:23).
Sannadkii hore waxaan xasuustay kuwa ku bixiyay waxtarka ugu weyn ee dagaalka si loo hubiyo jiritaankeena qaran ahaan. Xusuusnadu waa wanaagsan tahay. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa inay tahay mid ka mid ah ereyada Ilaah ugu jecel yahay maxaa yeelay marar badan ayuu u adeegsadaa. Wuxuu had iyo jeer ina xusuusiyaa in aan ka warhayno xididdada iyo mustaqbalkeenna. Waxay ina xusuusineysaa qofka uu yahay iyo inta uu inaga danaynayo; wuxuu doonayaa inuu na ogaado cidda aan nahay oo ma jirto sabab aan u dareemeyno amaan darro, wax qabad ama awood la'aan; waayo, waxaynu leennahay awood caalami ah oo inagu dhex jira sida jidhka Masiix; eeg cutubka kore. Hadiyaddan cajiibka ah ee awooddu nagama noola oo kaliya, laakiin waxay u baxdaa inay awood siiso dadka kale. «Joh. 7:37 "Haddii qof uun i rumaystaa, durdurradan biyo biyo nool ayaa qulquli doona."
Laakiin nasiib xumo, sida bini-aadamka ahaan, marar badan ayaan illaawinnaa tan. Muujinaya telefishanka "Kumaad ula jeedaa cidda aad tahay?" kaqeybgalayaashu waxay leeyihiin fursad ay ku bartaan aabayaashiin, si ay u bartaan, qaab nololeedkooda iyo aad ayey muhiim u tahay xitaa in la arko sawiradaada. Aniga qudhayduba waxaan leeyahay sawirrada xaaskayga, hooyaday, ayeeyaday iyo ayeeyaday, laakiin sawirradan ayaa iiga muujiyey wiilkayga hooyadiis, ayeeyo, ayeeyo / ayeeyo iyo ayeeyo-weyn! Oo dabcan waxay la micno tahay in wiilkiisu qabsado muuqaalka ayeeyadiis, ayeeyo / ayeeyo, ayeeyo / ayeeyo / ayeeyo / ayeeyo weyn! Tani waxay i xusuusineysaa qayb ka mid ah Qorniinka oo aan illoobey waqti dheer.
ISHACYAAH 51: 1-2 Kuwiinna xaqnimada raaca oo Rabbiga doondoonow, bal i maqla! Bal fiir dhagaxii aad ka qodday iyo ceelkii aad qoday. Bal eega aabbahaa Ibraahim iyo Saaray oo kuu dhashay! Maxaa yeelay waxaan ugu yeedhay isaga shaqsi ahaan, oo waan u duceeyey oo kordhiyey.
Aynu hore u sii qaadno hal tallaabo, Bawlos wuxuu noogu sheegayaa Galatiya 3:27 - 29 «Dhammaantiin ku baabtiisay Masiix Masiix waad soo jiidateen. Farqiga u dhexeeya Yuhuuda iyo Griigga, addoonka iyo qofka u digaya, nin iyo naagtiina way dhammaadeen - kulligiin waxaad tihiin Masiixa Ciise Masiix. Haddaad tihiin Masiixa kuwiisa, haddaba waxaad tihiin farcankii Ibraahim oo runtiis, oo waxaad tihiin kuwo dhaxla ballanqaadihiisa run. Haddii aan dib ugu noqonno qoraalka oo aan akhrino aayadaha 6 - 7, waxaa naloo sheegayaa: «Wuxuu rumeeyey Ilaah, waxaana lagu tiriyey xaqnimo. Haddaba aqoonsada: kuwa rumaysadka leh waa carruurtii Ibraahim. Waxaan halkaas ku hubinay in dhammaan kuwa Ilaah rumeeyey ay yihiin farcankii Ibraahim ee dhabta ahaa. Halkan Bawlos wuxuu dib ugu tilmaamayaa Aabbe Ibraahim, dhagaxii weynaa ee nalaga xardhay oo markaa waxaan ka barannaa cashar gaar ah oo iimaanka iyo aaminaada isaga laga helo!
Aabe, waad ku mahadsantahay aabe Ibraahim iyo tusaaladiisii ​​qaaska ee innaga. Aamiin